Gollaha Wasiirada Xukuumada KMG ka Ah oo Fadhigoodii Maanta Kaga Dhawaaqay Shiweyne Qaran oo Muqdisho Ka Dhici Doona Bisha Lixaad Ee Sanadkan | buqaqable.net
Muqdisho: Golaha Wasiirada oo Mamnuucey Jaridda Dhirta April 19, 2018
Xukuumadd Federalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ansixisay sharci mamnuucaya jarista dhirta. Kulan uu Golaha Wasiiradu ku yeeshey Muqdisho, kaas oo arrimo kala duwan looga hadlay ayaa lagu ansixiyay sharcigan.
London: La Dagaallanka Duumada oo Laga Shirey April 19, 2018
Ka dib 16 sanadood oo si weyn uu hoos ugu dhacay cudurka duumada ama malariyada dunida oo dhan, ayaa hadda waxaa mar kale soo muuqanaya in kiisaska cudurkan ay so kordhayaan.
Cuba oo Madaxweyne Cusub Yeelaneysa April 19, 2018
Nin muddo dheer ku xigeen u ahaa hogaamiyaha Cuba, Raul Castro, ayaa lagu wadaa in maanta uu noqdo madaxweynaha cusub ee Cuba, taasoo ka dhigeysa in Cuba marki ugu horreysay uu xakumi doono nin ka baxsan qoyska reer Castro ku dhawaad 60 sannadood.
Gollaha Wasiirada Xukuumada KMG ka Ah oo Fadhigoodii Maanta Kaga Dhawaaqay Shiweyne Qaran oo Muqdisho Ka Dhici Doona Bisha Lixaad Ee Sanadkan
Posted on April 14, 2011 by Buqaqable.net
Muqdisho – Khamiis, 14 April 2011)—–Shirkii caadiga ahaa ay
Golaha Wasiiradu yeesheen maanta oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul
Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed ayaa
Waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay Nairobi iyo marxaladda kala guurka ah. Golahu waxey dib-u-eegid ku sameeyeen kulankii wadatashiga ‘heerka sare’ ee ka dhacay Nairobi 12kii iyo 13kii April 2011. Kulankan ma noqon mid miro dhal ah oo buuxiya waxii laga filayey, mana aheyn mid matala danaha shacabka soomaaliyeed.
Ka dib Golahu markii ay ka hadleen mustaqbalka iyo xilliga kala guurka ah iyo sida ugu habboon ee loo raadin karo nabad, wadatashi iyo dib-u-heshiisiin dhameystiran, isla markaana ka doodeen ayey waxey Golahu isku raaceen arrimaha soo socda:
In Dowladda FKMG ah ay diyaar u tahay in wadatashi, isla xisaabtan iyo dib-uheshiisiin dhab ah ay dhex marto dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed, ha noqdaan Maamuladda Gobolada, Ahlu Sunna WalJameeca, ururada bulshada,
Madaxda dhaqanka iyo kuwa diinta iyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda. Guddiga siyaasadda ee heer wasiir ah inay ka soo talo bixiyaan habka ugu habboon ee shir Somalida isagu timaado waddanka gudihiisa isla markaana ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan Golaha Wasiiradda.
In shir wadatashi iyo dib-u-heshiisiin heer sare ah lagu qabto dalka gudihiisa bisha June 11keeda ilaa 16-ka, shirkan oo ah mid ay Dowladda FKMG ah horseed ka tahay iyadoo la tashaneysa isla markaana kaashaneysa beesha caalamka iyo Qaramada Midoobey.
In ajendaha, macluumaadka iyo qorshaha shirkan uu noqdo mid dhammaan ka qeybgalayaasha lagala tashto si uu u noqdo mid ay dhammaan ka qebygalayaasha isku raaceen. Golahu waxuu isku raacay in dhammaan qeybaha bulshada la gaaro oo lagala tashto
Ajendaha iyo waxa la filayo inay ka soo baxaan shirka. Shirkan ayaa noqon doona mid wadatashi siyaasadeed isla markaana looga hadlayo habka loo wajahayo mustaqbalka shacabka soomaaliyeed.
« Madaxweyne Shariif iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo Maanta u Safray Wadamada Ethiopia iyo Tanzania ( War-Saxaafadeed ) C/llaahi Yusuf Madaxweynihii Hore Ee TFG da oo Si Kulul u Cambaareeyay Shirkii Nairobi iyo intii Ka Qeyb Gashay Si Gaar Ahna Faroore iyo Shariif Xasan ( Dhageyso ) »
Waxaa warqadaha diyaariyay James Comey, waxaana horey loogu gudbiyay guddiga Aqalka Congress-ka oo baaraya arrimaha ku saabsan xiriirka Trump iyo dowladda Ruushka.
Waa 71 jir, wuxuuna sheegay in uu isaga wax kasoo saaray suntii lagu weeraray Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia Skripal, weerarkaas oo ka dhacay magaalada Salisbury ee UK.
Nin u dhashay dalka Hindiya oo la weysaa muddo 40 sano ah ayaa qoyskiisa la midoobay kaddib markii uu walaalkiis ka aqoonsaday muqaal lagu baahiyey baraha bulshada. Khomdram Gambhir Singh ayaa la waayey isagoo 26 sano jir ah 1978kii.
Lance ayaa sidoo kale sanadkii 2012-kii gabi ahaanba laga mamnuucay in uu ka qeybgalo ciyaaraha baaskiilka inta ka dhiman noloshiisa.
Dad badan ayaa olole ka wada baraha bulshada, iyaga oo ku baaqaya isu soo baxyo balaaran haddii uu Trump ku dhaqaaqo go'aanka uu ku eryayo Robert Meuller.
Faleebooyinka ayaa waxaa ku jira maado cayayaanka looga leylayo geedka oo uu aboor galay, kaas oo sababi kara in uu dhinto.
Inta badan dadka ku nool dunida ayaanay u suuragelin inay badalaan magaca dal uu leeyahay, hasayeeshee Boqor Mswati ayaa arrintaas sameeyay.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa ayaa dib ogu laabtay dalkiisa, soona gabagabeeyay safar uu ku joogay magaalada London ee dalka Britain, halkaasi oo uu uga qeyb galayay shirka wadammada barwaaqa sooranka, si uu wax uga qabto rabshadaha laga soo sheegayo dalkiisa.
Miguel Díaz-Canel ayaa waxaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Cuba, isagoo badelaya Raul Castro kaas oo 2006 xilka kala wareegay walaalkiiga xanuunsan ee Fidel.
Dad iska dhigaya ganacsato Swiss ah ayaa $320,00 ku kireystay sanadkii tuulada Caruus ee Suudaan.
Waxaa degmada Wajeer ka dhacay weeraro is xig xigay oo lagu qaaday macalimiin halkaas wax barta